Zavatra Hahalala Rehefa Driving In Eoropa | Save A Train
Home > Travel Europe > Zavatra Hahalala Rehefa Driving In Eoropa
-Jatony manintona sy manan-tantara lehibe fomba fijery izay miainga avy amin'ny masoandro nanoroka dranomasina mba cavernous tendrombohitra, Eoropa tena manana rehetra. Izany no tsara toerana ho an'ny dia lavitra, araka izay azo atao ny manao ny lalana avy amin'ny firenena iray hafa amin'ny resaka ora. Izany koa dia iray amin'ireo faritra azo antoka indrindra eto amin'izao tontolo izao dia lavitra. Na dia eo aza ny vaovao fa ny EU vao haingana tsy mba hampihenana ny haavon'ny fiara mampidi-doza, ny eo ho eo ny tahan'ny fahafatesana dia mbola ambany indrindra dia hatramin'izay (1 in 49 tapitrisa).
Tsara homarihina fa misy politika sy faneriterena sasany ao an-toerana momba ny fanofana fiara sy ny firenena tsirairay manana ny napetraka ny lalàna tsy manam-paharoa. Inona no azo ekena ao amin'ny firenena iray (mitondra fiara tsy misy hafainganam-pandeha fari-tany Autobahn tany Alemaina, ohatra) Mety tsy ho amin'ny iray hafa, dia toy izany no mandoa ny hahatakatra ny fitsipiky ny lalana rehefa manao ny lalanao amin'ny kaontinanta.
Miaraka amin'izany ao an-tsaina, dia efa namboarinay mora raisina ny sasany toro-hevitra mba hanampy anareo ho voaro sy ao am-dalàna mandritra ny dia lavitra manaraka Eoropa:
1) Antoka ny Vehicle
Tsy filaza mandidin 'fa manana fiantohana sy fandringanana rakotra rehefa nitondra fiara handeha any Eoropa. Raha toa ianao ka naka ny fiara manokana, dia mila hifandray ny orinasa fiantohana mba handamina izany. Insurance matetika Nivoaka faingana eo ny fifanarahana rehefa manakarama fiara, izay mahatonga zavatra kely mora kokoa.
2) Ento Iantrao ny solomaso Ary Contact Lenses
Fantatrao ve fa raha toa ka mila ny manao levitra Mitovy amin'ilay family mbola rehefa nitondra fiara handeha ny valim-pahasasarana fiara amin'ny alalan'ny Espaina, ianao dia maintsy mitondra ny mpivady faharoa aminao amin'ny fotoana rehetra? Firenena hafa dia tsy hentitra momba izany, Fa tsara fahazarana ny hitondra ny mpivady faharoa ny maso anaovan'ireo aminao amin'ny fotoana rehetra, mba hahazoana antoka fantatrao ny loza rehetra mandritra ny dia ny Kilonga dia tokony maso anaovan'ireo fiatoana, na ho very.
3) Mazava ho Aza-toaka ary ny Fitondrana Fiara
Na dia toa toy ny hita fanambarana, dia mety tsy ho fantatry ny firenena fa ny sasany manana aotra fandeferana voafetra ho an'ny zava-pisotro mpamily. Midika izany fa ny mpamily no tsy mahazo manana toaka ny ra na inona na inona. Ny Vaomiera Eoropeana manome torohevitra momba ny fitsipika ra toaka fetra isaky ny firenena. tany Chypre, fa na dia manohitra ny lalàna misotro zava-pisotro malefaka rehefa nitondra fiara handeha. Mety toa hentitra, fa zava-dehibe ny hanaja ny lalàn 'ny tany izay vangianao mba hisorohana ny tsy ampoizina lamandy.
4) Roahy ho amin'ny ankavanana, na ho amin'ny ankavia
Afa-tsy ny Fanjakana, Irlandy, ary Malta, firenena eoropeanina rehetra mitondra fiara eo amin'ny ankavanan'ny sisin-dalana. Fa UK mponina, izany dia afaka manao tetika toy ny fifampiraharahana ny fihodinana ao amin'ny tari-dalana manaraka ny fihodin'ny famantaranandro mifanohitra tena mamitaka, noho izany dia mendrika ny maka fotoana mba zatra. Mpamily dia tokony hifikitra foana amin'ny tsara sy tsy nitoetra tao amin'ny sakeli-dalana eto afovoan lalambe izy ireo tojo. Rehefa nandrendrika, hahatsiaro mandrakariva hijery ny fitaratra aoriana fijery ihany koa.
5) Miborosy Up amin'ny famantaran-dalana
Ny fahatakarana Eoropeana famantaran-dalana dia hanampy anao hahatratra ny tanjonao soa aman-tsara ary hanampy anao tsy mandika ny lalàna. Most Eoropa toerana signage mampiasa fitsipika izay fanazavana tena ara-drariny, fa fahasamihafana madinidinika amin'ny endri-tsoratra na loko mirona hampifangaro. Alohan 'ny hanombohan an-tany hafa, you might want to familiarize yourself with the kolaka fahasamihafana in-dalana signage manerana an'i Eoropa. Farafaharatsiny, dia mety hanampy mba hisorohana ny fikorontanana, ary raha be indrindra, mety hamonjy ny ainao.
6) Hahatakatra ny fomba Collections Toll asa
Tsy mitovy amin'ny firenena sy ny tahan'ny isan'ny fomba fanangonana ketra. any Frantsa, ohatra, dia mbola azo ekena ny mandoa vola amin'ny vola teo am-isan'ny vavahady. Faritra hafa dia hitaky anareo mba hampiseho ny taratasy mandraikitena eo amin'ny fiara mba hanasongadinana fa efa nandoa hampiasa lalana sasany. Familiarizing ny tenanao amin'ny fomba-paty miasa isaky ny toerana natao hanampy anao tsy misy sazy.
7) Alao ny Train fa tsy Fitondrana Fiara
Tsara raha tena te-hankafy ny diany, hiala ny manahirana ny mitondra fiara, ary ny fiaran-dalamby handray fotsiny any Eoropa, rehetra ao amin'ny kaontinanta ity mampiasa ny fiaran-dalamby, ary tsy toy ny toeran-kafa eto amin'izao tontolo izao, dia tena mora ny lamasinina hividy tapakila amin'ny toerana an-tserasera tahaka ny Save A Train, ary mahazo handeha sy hahita ny maha tsy manahy be loatra.
Vonona mankafy Eoropa? handresy fidinao mitondra fiara, na mandray ny fiaran-dalamby, tsarovy antsika amin'ny Save A Train!
Tianao ve mba hiraketana ny bilaogy lahatsoratra “Zavatra hahafantatra rehefa mitondra fiara any Eoropa” tao amin'ny toerana? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome voninahitra fotsiny amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: ny https://embed.ly/code?url =ny https://www.saveatrain.com/blog/things-to-know-when-driving-in-europe/ ‎– (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
#mitondra fiara rail fiarandalamby Train Travel
I work as a part time tour guide in Kent and blogs about the experience. Her favorite weekend activity is a walking tour in South West Coast of Bristol. She is also a strong advocate of sustainable lifestyle, and hopes to write a book about it someday. She lives with her parents and her Frenchie named Coco - Afaka tsindrio eto raha antsoy aho